Da’yarka Aduunka Ka Soo Yaabsaday Ee Trent Alexander-Arnold Oo Shaaca Ka Qaaday Hadalo Uu James Milner U Sheegi Jiray Kulan Kasta Oo Wayn Ka Hor. – GOOL24.NET
Da’yarka Aduunka Ka Soo Yaabsaday Ee Trent Alexander-Arnold Oo Shaaca Ka Qaaday Hadalo Uu James Milner U Sheegi Jiray Kulan Kasta Oo Wayn Ka Hor.
Difaaca da’yarka ah ee kooxda Liverpool iyo xulka qaranka England ee Trent Alexander-Arnold ayaa soo qaatay xili ciyaareed uu qof kasta kaga yaabsaday kadib markii uu isaga oo 19 sano jir ah muujiyay in uu xaq u yeeshay sidii uu koobka aduunka ugu matali lahaa xulka qarankiisa England isaga oo arintan ku mutaystay qaab ciyaareedkii layaabka lahaa ee uu xili ciyaareedkiisii ugu horeeyay kooxda kowaad uu iskugu muujiyay.
Bilawgii xili ciyaareedkii dhamaaday waxa uu Klopp dhexda u galay mashaqo difaaca midig ah kadib markii uu dhaawacyo ku waayay Nathaniel Clyne oo ugu dhawaan xili ciyaareedkaas dhaawaac ku seegay iyo waliba Joe Gomez oo isna dhaawac soo gaadhay, wuxuuna Klopp si layaableh u aaminay 19 sano jirka Trent Alexander-Arnold.
Hadda Trent Alexander-Arnold waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda ay jamaahiirta The Kop ugu jecel yihiin kooxdooda maadaama oo uu muujiyay hadal uu hore Steven Gerard xidigan ugu sifeeyay wuxuuna hadda u muuqdaa mid haya dariiqii uu isla Gerard soo maray.
Laakiin marka horumara uu Klopp ku sameeyay Trent Alexander-Arnold laga yimaado waxa uu shaaca ka qaaday in James Milner uu ahaa ciyaartoyga uu talada ugu badan ka helayay markasta oo ay kooxdoodu ciyaarayso kulan wayn.
Alexander-Arnold oo hadda xulka qarankiisa England ku matali doona koobka aduunka ayaa waraysi uu bixiyay ku shaaciyay in James Minler uu ka hor kulan kasta oo wayn u sheegayay in aanu qaab ciyaareedkiisa u badalin kooxda lala ciyaarayo isla markaana uu sii wato qaabkii uu markii hore u ciyaarayay.
Alexander-Arnold oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Aniga James wax badan ayuu i baray. Sidayda oo kale waxa uu xaqiiqdii soo maray da’yaraan, markasta halkaas ayuu ii joogay haddii aan u baahdo in aan cid u tago. Waa wax muhiim ah in aad haysato ciyaartoy noocaas ah oo kugu xeeran”.
Trent Alexander-Arnold oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Marka aad Liverpool joogto, isagu waa mid ka mid ah ciyaartoyda xaqiiqdii waayihiisa ciyaareed ku soo guulaystay, isagu waxa uu yaqaanaa sida wax loogu guulaysto iyo sida loo qabto”.
Intaa kadib Trent Alexander-Arnold ayaa faah faahin ka bixiyay sida James Milner uu saamayn xoogan ugu soo yeeshay horumarkiisa wuxuuna yidhi: “Isagu si wayn ayuu aniga xili ciyaareedkan ii caawiyay. Isagu markasta aniga ayuu ii iman jiray ka hor kulanka wayn, wuxuuna ii sheegayay aniga in kaliya aan sii wato qaabka aan u ciyaaro oo aanan wax badan badalin ciyaartayda”.
Trent Alexander-Arnold ayaa hadalkiisa sii raaciyay: ” Taasi waa mid ka mid ah waxyaabihii aan xaqiiqdii u guulaystay, kaliya in aan u ciyaaro sida aan u ciyaaro oo aanan cidna u badalin”.
Alexander-Arnold ayaa ku guulaystay abaal marinta da’yarkii kooxdiisa Liverpool ugu fiicnaa xili ciyaareedkii dhamaaday waxayna hadda u muuqataa in si buuxda uu u hantiyay taageerada jamaahiirta kooxdiisa, ciyaartoyda kooxdiisa kowaad iyo waliba tababaraha Reds ee Klopp.
WEERAR: Real Madrid Oo Ku Hawlan Qorshe Ay Hal Wada Jir Ugu Dalbanayso Xiddigaha Liverpool Liverpool Ee Sadio Mane Iyo Mohamed Salah